Java dia mbola marefo amin'ny 0 andro na eo aza ny fanavaozana. | Avy amin'ny Linux
Tamin'ity herinandro ity dia be ny resaka momba an'i Java. Nisy resaka tany am-piandohan'ny kinova 7 fanavaozana 10. Tena mora tohina izy io. Tena mora tohina sy be fanakianana izany, ka maro no nanolotra ny fanesorana tanteraka ny Java amin'ny solosain'izy ireo.
0-andro Un fanafihana andro aotra (amin'ny teny anglisy fanafihana zero andro na fanafihana 0 andro) dia fanafihana fampiharana na rafitra mikendry ny hanao kaody ratsy noho ny fahalalana ny fahalemena izay, amin'ny ankapobeny, dia tsy fantatry ny olona sy ny mpanamboatra ny vokatra. Mihevitra izany fa mbola tsy namboarina izy ireo. Ity karazana mitrandraka mazàna izy io dia mivezivezy eo amin'ireo laharan'ny mpanafika mandra-pahavony amin'ny forum ho an'ny daholobe. Ny fanafihana iray andro aotra dia heverina ho iray amin'ireo fitaovana mampidi-doza indrindra a adin'ny solosaina1
Ny fahalemena dia matotra tokoa satria namela ny fanatanterahana sy ny fametrahana ny lozisialy amin'ny rafitra io raha tsy fantatry ny mpampiasa, navela hangalarina izany vaovao izany, ary hanao zavatra saika.
Tao anatin'ny andro farany dia namoaka ny kinova vaovaon'izy ireo ny "genius" an'ny Oracle miaraka amina patch patch ho an'ilay 0 andro antsoina hoe Java 7 update 11.
Saingy maro no milaza fa mbola mitohy ny faharefoana. Na ny tena marina, mbola tsy nasiana paty tanteraka. Raha ny filazan'ny manam-pahaizana dia nilaza izy ireo fa mety haharitra 2 taona ny Oracle mba hamahana tanteraka ity fahalemena ity.
Avy any Oracle dia manolotra anay izy ireo handeha amin'ny tontolon'ny fanaraha-maso Java ary hanitsy ny haavon'ny fiarovana ary hamadika azy io avy eo amin'ny antonony ka hatramin'ny avo ary izany dia hanasarotra kokoa ny fampiharana kaody ratsy raha tsy mahazo alalana avy aminay. Tandremo anefa "Hananasarotra kokoa" Tsy hampiato azy io.
Izaho manokana milaza fa tapitra ny fotoana Java. Hatramin'ny namakiako bilaogy dia hita fa tena marefo i Java ary ny marina dia tsy hitako mihitsy raha nametraka Java aho na tsia. Midika izany fa tsy hitako ny mahasamihafa azy. Izaho manokana dia nanala azy efa taloha ela be ary ny fiainako dia tsy miova. Mazava ho azy fa azo antoka 😀
Manoro hevitra anao aho raha mpampiasa birao ianao. Common sy wild, aza mametraka Java. Manana ny ampy amin'ny Flash isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Java dia mbola marefo amin'ny 0 andro na eo aza ny fanavaozana.
Tsy haiko hoe maninona aho no mahazo tsiky kely rehefa mamaky an'io. Angamba izaho io; D
Efa roa izahay hehehe
Tsy openjdk akory?
Raha homebanking ianao na mampiasa tranokala sarotra dia azo inoana fa mila apetraka Java hampiasa azy ireo ianao - Java RTE, fa tsy OpenJDK izay tsy miasa ny ankamaroan'ireo tranonkala ireo.
Raha marina ny msx, amin'ny ahy koa ohatra dia ilaina ny miditra amin'ny rafitry ny naoty sy ny fisoratana anarana ny lalam-piangonako. Raha izany no izy, aza raisina amin'ny fomba tsy izy, fa azonao atao ve ny mametraka ireo loharano milaza fa mbola mitohy ny faharefoana aorian'ny fanavaozana? Liana amin'ny fahalalana bebe kokoa aho satria ny fampiasana java dia ratsy ilaina.
Izaho foana no mpanelingelina be indrindra an'i Java amin'ireo faritra ireo. Ny marina dia miseho amin'ity fiteny ity foana ireo karazana fahalemena mitsikera ireo ary izany no iray amin'ireo antony maro tsy itiavako ny fampiasana vokatra ratsy kalitao toy izany.
Andao, tsy ela dia hiverina amiko ny iray ary mamaly fa Java ity, ny Android no iray hafa ... ny shit Java.
Fanitsiana kely: ny tsy fandriam-pahalemana dia tsy ny fiteny (izay miaraka amin'ny kilasy sy ny rameva rameva dia mahatsiravina, izany) fa ny milina virtoaly izay nanangonana an'i Java tamin'ny sidina.
Mazava ho azy ny hadisoako tamin'ny tsy famaritako azy, indraindray dia mazàna aho manome ankapobeny.
Fa tsy tiako ny zavatra rehetra misy ifandraisany amin'i Java.
Anisan'izany ny motera dalvik mahatsiravina, miadana, arisika ary maharary izay ampiasain'ny android.
Ugh, tsara ny mahita olona manana hevitra nefa tsy matahotra milaza zavatra toa azy.
Soa ihany, ny ho avy dia mampanantena amin'ny alàlan'ny safidy maro hafa izay eo amin'ny dingana farany amin'ny fahamatorana: D: D
Fotoana izao hanoloana an'i Java manontolo amin'ny Python ... Heveriko. Araka ny voalazan'ny mpanoratra dia tapitra ny fotoanan'ny Java.
Raha manaiky aho fa ny python dia tsy mila atambatra akory, fa ahoana no fomba fampidinana tsy misy jdownloader?, Tucan dia tsy miasa ho ahy ary ratfat ratsy kokoa, iza no manolotra programa fampidinana multi-protokoloka izay iasan'ny rohy deposfile?.
Enga anie ny lehibeko tsy hamaky an'ity .. raha tsy hanokan-tena hivarotra asa-tanana eny an-kianja aho… hehehe
Tsara amin'ny vaovao; Na izany na tsy izany, ao amin'ireo tranonkala novakiako momba ity fahalemen'ny Java ity dia mampitandrina ireo mpampiasa Windows sy OS X fotsiny izy ireo, tsy mbola nahita resaka momba ny GNU / Linux aho, na izany na tsy izany, toy ny zava-drehetra, ny ambaratonga Ny loza aterak'izany dia hiankina amin'ny fahazaran-dratsy sy ny fiarovana antsika. Etsy ankilany, tsy dia mazava loatra amiko ny momba ny fampandehanana sy / na ny fanesorana tanteraka ny Java, satria tsy ny browser ihany no mampiasa azy; raha mijery akaiky ianao, ny suite LibreOffice sy OpenOffice dia mametraka azy ary mampiasa azy io ho default, ka tsy azoko antoka hoe hatraiza ny fahombiazan'ny "esory", raha misy manana hevitra mazava kokoa momba an'io raharaha io, dia tiako ny manazava azy amin'ny antsipiriany.
Linux IS marefo:
Ary na dia mampihena ny risika aza ianao amin'ny tsy fitsidihana ireo pejy misy filaminana azo antoka, dia mety hiteraka ny tsimok'aretina ny fitsidihana pejy iray misy marimaritra iraisana (tranokalan'ny sekoly misy anao, fivarotana fivarotana sns.).
Na dia azo antoka aza ny Linux, aza omena ny angano fa tsy azo kitihina izy io.
Tsy toy izany.
Milamina ny GNU / Linux, ny tsy fandriampahalemana dia Java.
Windows dia tsy milamin-tsaina miaraka na tsy misy Java.
Raha avelanao hisokatra ny seriver SSH amin'ny seranana 22 miaraka amin'ny fidirana amin'ny root ary tsy misy teny miafina, hiditra lojika ho Pancho ao an-trano izy ireo.
Tsy misy FUD feed.
Ary ampiako hoe: ny olana amin'i Java dia ny takiana ambany amin'ny milina virtoaly, amin'ity hazavana vaovao ity dia miharihary fa:
Ny milina virtoaly dia mila fidirana amin'ny ambaratonga ambany amin'ny rafitra hiasa, izay ny tena izy dia hadisoana famolavolana ary vector fanafihana satria ny rafitra (GNU / Linux amin'ity tranga ity) dia tsy manana fomba fiasa na fiarovana ny tenany satria manome ny ara-bakiteny ny lakilen'ny Java.
Raha ny lojika, raha mangataka fidirana tsy voafetra amin'ny rafitra hiasa ny masinina virtoaly, io no ho teboka malemy indrindra amin'ny rafitra ary ny fiarovana ankapobeny ny rafitra dia ho voamariky ny fiarovana ireo fampiharana izay mila mihazakazaka amin'ny habaky ny kernel na ny mpampiasa. toerana. tombony.
Soraty ny tenanao, vakio, fantaro ary - azafady - aza manaparitaka ny FUD.
Raha ny tsaroako na azoko dia tsy misy fomba ahafahan'ny rindranasa miditra amin'ny ambaratonga ambany amin'ny hetsika ao Kernel.
Novakiako io fa amin'izao fotoana izao tsy tadidiko hoe aiza ary ny tena marina dia tsy dia haiko loatra ny miady hevitra momba an'io ... Tsy dia tompon'andraikitra loatra aho, fa te hanome hevitra momba azy ihany.
Manana libreoffice aho ary tsy nametraka Java.
Amin'ny tranga Windows dia misy fiatraikany amin'ny XP sy 7. Windows 8 sy Explorer 10 tsy misy olana. Ao amin'ny PC miaraka amin'ny Linux dia efa nesoriko tao anaty browser, raha sanatria ka manidina.
Raha mampiasa Sun Java amin'ny Linux ianao dia mila fotoana fohy vao havaozina. Indrindra raha Distros toa Debian no ampiasainao. Avy eo matetika na manangona na mametraka ny .debs manual. Noho izany dia tsy manavao ny tenany izy ireo.
esory fotsiny ny plugins, tsy mila esorina
Inona no ilaina amin'ny fametrahana plugin iray sy fanafoanana azy?
Raha raisina ny olana dia mamela anao ianao, heveriko fa havaozina miaraka amin'ny patch.
fa rehefa mamaha ny olana izy ireo ary mamoaka kinova vaovao dia avelanao handeha indray izy ireo, dia mitovy amin'ny lazain'i Juan Carlos afa-tsy ny fametahana azy ireo, na inona na inona fanesorany azy ireo dia toa mitohy hatrany ny olana
Mametraka openjdk ny Libreoffice, tsy mametraka Java izy, eo amin'io lafiny io dia tsy misy olana, ankehitriny hoy i msx, eny
Yupiiii, azontsika antoka.
Ahoana ny openjdk?
Minecrafter aho .. Tsy vonona hilavo lefona mora foana aho 😛
Jereo ny manazava zavatra iray ho ahy, misy fiantraikany amin'ny openjdk ve izany lesoka izany? satria avy amin'ny zavatra fantatro ny ankamaroan'ny linux mampiasa openjdk, satria avy amin'izay novakiako dia hadisoana bug na oracle java
Ahoana ny fomba hahazoana fampisehoana tsaratsara kokoa amin'ny Steam ho an'ny Linux